Shiinaha Warshad caan ah oo burush timo caan ah iyo soosaarayaal | Yongsheng
Wax soo saar hore ------muunad------ xaqiijinta-Qalabka------ iibsiga-Qeyb ------qayb------ Cirbadda-Tayada------ kormeerka-Qeybaha ------qayb ------dusha sare------ dhammaystirid-Tayo ------kormeerka-Golaha-Tayada ------kormeerka-xirxirida.
Waxaan leenahay burush timo qaab caan ah oo caan ah.
Waxaad ka dooran kartaa ubax midab leh UV timaha dhamaysta korantada midab leh, Burushka timaha midabka leh ee midabka leh ee leh naylka, Nadiifinta midabada leh ee cadayga oo leh godad ku yaal barkinta, Burushka qoyan ee midabka leh leh caagga, Ubax ubaxa UV koronto dhammeystiran barkin timo, Cirbadda caadiga ah buraashka timaha barkin, Burushka ku caayinta bristles iyo nylon isku qasan, burush qoyan oo qaab 3D daabacan midab ah.
Oo waxaan haynaa waxyaabo cusub oo filo caag, alwaax iyo bamboo. Waa walxo isku-dhafan oo loo yaqaan 'Biomass'. Waa nooc cusub oo walxo iska caabin ah oo ka kooban maadada macromolecular iyo maadada biomass. Maaddaama waxyaabaha ku jira agabyada cusub ee deegaanka ay ka badan yihiin 50%, badeecaddu waxay leedahay faa'iidooyinka ilaalinta deegaanka iyo kaarboon hooseysa. Oo waxaan haysannaa fiber bamboo iyo caws oo la heli karo.
Burushka xanaaqa ayaa hagaajin kara xakamaynta qaabeynta isku dhafka boar iyo naylka. Jiirka Jiirka Taabashadu waxay leedahay astaamo loogu talagalay kala-tagista, kala-soocidda, iyo taabashada ugu dambeysa. Gawaarida gaagaaban ee gaaban si loo abuuro xiisad iyo iftiin iyo nuurooyinka nylon ee kor loo qaado tourmaline ayaa si fudud ugu dhex mara timaha. Burushka buraashka cadayga ayaa nadiifiya oo xajiya timaha waxayna u qaybiyaan saliidaha dabiiciga ah ee timaha timaha.
Burushka timaha hawo-mareenka qoyan ee timaha waxaa laga sameeyaa waxyaabo ka hortag ah, biinanka jilicsan ayaa keena adkeysi heer sare ah iyo adkeysi. Xalal fiican oo ku saabsan timaha fuulista, dhibaatooyinka korantada iyo fudeydka nadiifinta.
Hore: Burush timo alwaax iyo bamboo
Xiga: Burushka timaha yar oo leh caag midab leh, UV koronto, wareejinta biyaha
Burushka Timaha Bamboo Custom
Oem Bamboo Timaha Burushka
Burush timo xirfadeed
Burushka timaha burushka timaha
Burush timaha paddle timaha